Waxyaabihii laga bartay guushii ay kooxda Barcelona ka gaartay Atletico Madrid ee CL … (Maxay ka dhignaayeen goolashii Luis Suarez?) – Gool FM
Waxyaabihii laga bartay guushii ay kooxda Barcelona ka gaartay Atletico Madrid ee CL … (Maxay ka dhignaayeen goolashii Luis Suarez?)
(Barcelona) 06 Abriil 2016 – Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa guul soo laabasho ah ka gaartay Atletico Madrid oo ay ku soo dhawaysay garoonkeeda, lugta hore ee wareegga siddeed dhammaadka Champions League.
Ciyaartii ka dhacday garoonka Camp Nou ayaa kooxda Barcelona gool looga naxsaday waxaana ka dhaliyey Torres 25’daqiiqo, inkastoo ay ku adkaadeen 2-1, iyadoo Barcelona uu labada gool u ansixiyey Luis Suarez.
>- Kooxda Barcelona ayaa guul gaartay todoba kulan oo xiriir ah oo ay la ciyaareen Atletico Madrid tartammada oo dhan.
>- Saddex ciyaaryahan oo kaliya ayaa u baahday kulamo ka yar inta uu u baahday Luis Suárez oo ah (23 kulan) si ay u dhaliyeen 16 gool oo Champions League ah— waxa ay kala yihiin Ruud Van Nistelrooy oo ay 20 kulan ku qaadatay, Roberto Soldado oo ay isna 20 kulan ku qaadatay iyo Jari Litmanen oo ay 22 kulan ku qaadatay.
>- Suarez hadda waxa uu dhaliyey 45 gool 45 kulan oo uu u ciyaaray kooxdiisa Barcelona xilli ciyaareedkan.
> – Luis Suarez ayaa dhalinayey labo gool iyo wax ka badan 11 kulan oo kala duwan oo uu u ciyaaray kooxda Barcelona xilli ciyaareedkan.
>- Wiilasha MSN la isku yiraahdo ee kooxda Barcelona Lionel Messi, Luis Suarez iyo Neymar ayaa ku guuldarraysay kulankan inay hal shuut oo bartilmaameed toos ah sameeyaan qeybta hore ee ciyaarta, inkastoo qeybtii dambe goolal uu dhaliyey Suarez ay guul kaga gaareen Atletico Madrid.
>-Tobankii daqiiqo oo waallida ahayd ee Fernando Torres kulankan ’25-daqiiqo waxa uu dhaliyey goolka furitaanka ciyaarta, ’29-daqiiqo waxa uu qaatay kaarka digniinta ama Jaallaha, halka ’35-daqiiqo uu qaatay kaarka cas ee kulankan waa muddo ku siman 10 daqiiqo.
>- Fernando Torres ayaa ka dhaliyey Barcelona goolkiisii 11-aad, waana kooxda uu ugu jecel yahay inuu gool ka dhaliyo, 10 ka mid ah goolashaas waxa uu ka dhaliyey isagoo xiran maaliya Atletico, hal gool kalena waxa uu ka dhaliyey isagoo matalayey Chelsea.
>- Atletico Madrid ayaa loo taagay 77 kaarka cas Champions League tan iyo markii uu bilowday xilli ciyaareedka 2013/14; ugu yaraan waxa ay 18 ka badan yihiin kooxaha kale marka loo eego waqtigaas.